Xaaladaha Guud ee Isticmaal - Rikoooo
Xaaladaha Guud ee Isticmaalka Rikoooo.com
Last modified on the 16 / 01 / 2017
Shuruudaha Kuwani Isticmaalka tilmaami xaaladaha ka yar taas oo Website Rikoooo.com waxay bixisaa helidda adeegyada ay. By diiwaan Rikoooo.com, idinku adkayn in ay aqbalaan oo dhan oo ka mid ah in dadkeenu Xaaladaha Guud ee Isticmaalka. Haddii aadan ku heshiiyaan in ay Shuruudaha iyo Xaaladaha, ma laga yaabaa in aad isticmaasho adeegyadayada.
Adeeggan adiga kuu wargalisa markasta file cusub waxaa laga heli karaa for download iyo macluumaad muhiim ah. cinwaanka email Your la isugu ma gudbiyo si ay dhinac kasta oo saddexaad oo weli adag qarsoodi ah. Waxaad mar kasta ka beddeli kartaa oo ka joojisid Times aad aagga xubin ama hoose ee email kasta helay.
Isticmaalka Your Area Xubnaha
Si aad u hesho meesha xubin aad, aad leedahay aqoonsi ah iyo password in aad naftaada ka go'an marka aad marka hore u galeen. In case of khasaaro ka mid ah magacaaga iyo isgarad, aad si deg deg ah ka heli kartaa on site Rikoooo.com adigoo gujinaya on link oo ku jirta zone ee aqoonsiga:
markaas laguu soo diri doonaa email ah oo ay ku jiraan aad password.
In si waafaqsan sharciga "Informatique et Liberté" ee 6 January 1978, waxaad xaq u leedahay in ay helaan, wax ka beddelo, sixid iyo tirtirto xogta adiga kugu saabsan.
Si this xaq saddex xal la heli karaa in aad.
- Log in si aad "Xubin Area"Iyo wixii isbeddel ah online ka dhigi.
- La xiriir Webmaster
- Dir warqad lagu talinayaa in Rikoooo.com 107 chemin Gaillard du dekedda 31410 Nuux - France
Rikoooo.com fuliya si ay u isticmaalaan oo dhan ka dhigan tahay lagama maarmaan si loo hubiyo in bixinta fiican ee ugu macquulsan ee adeegyada bixiya si user Internet ah. Waxa aan waa lagu furi karaa in ay dhacdo of force majeure ama J. awoodooda ka baxsani, gaar ahaan haddii ay dhacdo kala go 'ah adeeg ka dhalanaya ka failure a of network telefoonka ama bixiyaha internet of user Internet ama update An qaybaha goobta ama server web ah.
Rikoooo.com mas'uul ka ah isticmaalka laga yaabaa in la sameeyo oo user ee macluumaadka iyo adeegyada la heli karo on site ma aha.